Induction Kuchenesa Midziyo Reactors yeChemical Heating Tank Viwanda
musha / Applications / Induction Heating / Induction Kuchenesa Midziyo Reactors
Category: Induction Heating Tags: tenga induction midziyo hita, kudziyisa makemikari anoita, kudziyisa midziyo, induction kupisa maactor, induction kudziyisa magetsi, induction kupisa tangi maakisi, induction kudziyisa midziyo, induction midziyo hita, induction midziyo yekupisa sisitimu, RF midziyo inogadziridza hita, midziyo inogadziridza kupisa, midziyo induction heater mutengo, midziyo reactors
Induction Kuchenesa Reactors Tank-Midziyo
Tine makore anopfuura makumi maviri ruzivo mu induction heat uye zvakagadzira, zvakagadzirwa, zvakagadzirwa, zvakaiswa uye zvakatumirwa Vessel uye Pipe Heating masisitimu kune nyika zhinji pasi rese.
Nekuda kweiyo yekupisa sisitimu iri yakapusa uye yakavimbika kwazvo, iyo sarudzo yekupisa ne induction inofanirwa kutariswa sesarudzo inosarudzwa.
Induction kudziyisa kunosanganisira ese mashongedzero emagetsi akatorwa akananga kunzira uye oshandurwa kuita kudziya chaiko panodiwa. Inogona kuiswa zvinobudirira kune chero mudziyo kana pombi sisitimu inoda sosi yekupisa.
Sezvo imwe neimwe induction kudziyisa mudziyo iri bespoke kune yega yega vatengi zvido nezvinodiwa, isu tinopa akasiyana saizi nekusiyana kwekupisa mitengo. Mainjiniya edu ave nemakore mazhinji echiitiko mukushanduka kwetsika yakavakirwa induction yekudziya masisitimu emhando dzakasiyana siyana dzekushandisa mune akasiyana maindasitiri. Heater dzakagadzirirwa kuti dzienderane nezvinodiwa chaizvo zveichi chiitiko uye zvakavakirwa kukasira kukodzera pamudziyo kungave mumabasa edu kana pane saiti.
nduction kudziyisa midziyo magetsi
Induction Kuchenesa Kupera kweMatope, Bheniti, Bhari